Sei Tichifanira Kushandisa Zvipo Our Mwari? — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Kuti ini kuwana chinhu nokuita, Ndinoda pfungwa kuti ndiri kuita chimwe chinhu chikuru. "Asi kana ini tora tsvina ichi kubva, achaita awane tsvina murume akaponesa?"Ndiri tanidzwa mukomana, uye ndiri kashoma vanokwezvwa mashoko kana richikunetesa mabasa. Zvinosuruvarisa, mashoko uye richikunetesa mabasa ndivo vakawanda upenyu chaihwo. Zvimwe ndosaka Ndakamborwisa zvikuru chesekondari, kunyange pashure ndakava muKristu. My pamasvomhu makirasi zvikaonekwa asingabatsiri uye homuweki vainzwa sokuti kutambisa nguva yangu.
Ndinoziva handisi chete anogona anoona zvakaoma kukurudzirwa dzimwe nguva. Tose tine mavhiki iwayo apo ndiri sezvinoita kumbobvira kupedza ichitanga blah. Isu dzimwe nguva chete tinoda kukurudzirwa nezvinhu zvikuru, asi zvinhu zvose zvikuru nokuti zvose chikamu nyaya huru. Nyaya hombe kuti Mwari ari kuudza nezvake uye kubwinya kwake.
Izvi ndizvo kunyange vechokwadi zvipo zvedu. Tinogona kuva kuedzwa kufunga zvipo zvedu sorutivi kutaura nyaya pamusoro pachedu. Kufanana zvose muupenyu zvishoma CV inotungamirira vamwe vari chaizvo nesu. Zvino panzvimbo zvose upenyu chitsauko iri guru nyaya kubwinya kwaMwari.
zvipo zvenyu varipo kubatsira nyaya huru.
Zvose pamusoro kubwinya kwaMwari
Ndinorangarira pandakatanga kufunga zvose iyi nzira. Ndakatanga rapping pandaiva muduku chaivo, uye zvose Ini rapped chakanga pachangu. Ndakabva ndaziva kuti zvose kwaivapo kubwinya kwaMwari, kwete kubwinya Trip. Pano mumwe ndima chaizvo ndakavhiringidza kundimedza.
15 Ndiye mufananidzo waMwari asingaoneki, dangwe rezvisikwa zvose. 16 Nekuti maari zvinhu zvose zvakasikwa, kudenga nepanyika, zvinoonekwa nezvisingaonekwi, zvigaro zvoushe kana masimba kana vatongi kana vane simba-zvinhu zvose zvakasikwa pachishandiswa iye uye nokuda kwake.
Ndinoda sei zvakajeka Pauro ari kuti Jesu akasika zvinhu zvose. Haasiyi chinhu kunze. Zvinhu panyika uye mumatenga, zvinhu zvaunogona kuona uye zvinhu haugoni kuona, madzimambo navabati dzakasiyana siyana, kunyange midzimu uye masimba. Gare gare mubhuku (uye kumwewo) Pauro anotaura midzimu sezvo vatongi kana vane simba zvakaipa. Uye ari vachiti zvakasikwa naMwari uye kuti Mwari. Zvakanaka kana kunyange madhimoni vakasikwa naJesu, Jesu, ipapo zvirokwazvo zvipo zvedu tiri.
Mwari akasika zvinhu zvose uye ane simba pamusoro payo.
Chimwe akasiyana zvinhu raMwari simba ndechokuti kumboiswa mumaoko kwaari. Madzimambo kukwira raitevera somudyi wenhaka. Coal vanosarudzwa. Cops vakadzidziswa uye kupiwa bheji. Mwari oga ndiye Uyo ari simba agara aripo.
Haana kutora pamusoro womumwe basa. Haana kudzidzisa nokuti. Haana kuti ukodzere nokuti. Haana kusarudzwa, uye haachazombonzwi anofanira impeached. Zvinhu zvakasikwa nokuda yokuva pasi pesimba rake, uye pavaitaura zvinangwa zvake zvakanaka.
saka, Mwari haana kuronga kuwana kubwinya chete kubva chikamu hwako, asi kubva yose.
zvipo zvenyu vakasikwa naMwari ane chinangwa chaicho, kuudza nyaya kubwinya kwake.
Pandinenge kutenga midziyo kubva Ikea, Ini nechekare zvinhu zviviri: 1, izvi zvimwe isaparara gore rinouya. uye 2, ipapo vari kuenda kuva mijenya zvezvimedu nemirayiridzo mukati.
Hazvingavi chimumumu kana ndikatora vamwe vevaya screws vakanga aireva kuti pasherufu uye akavashandisa chinhu? Vakapiwa kwandiri kuti zvinangwa kubva huni mapuranga kuti screws uye tools- uye vari chikamu pakuvaka kuti pasherufu. Zvipo zvose kuroora munhu ane zvishandiso yako KuMasiye rematurusi. Zvakananga kupiwa kuudza nyaya kubwinya kwaMwari. Ivo dziripo kuti tikudze Mwari.
Mumwe munhu angati, ko ini kunyange? Zvakadini wangu kuzadzika pachedu? Ndinoda kuva mukuru. Zvakanaka mukurusa basa unogona nokusingaperi kutamba, ndiwo muchinangwa tanidzwa. Uye Mwari akatidana tose kuva chikamu.
Asi sei isu kusvika kunzvimbo tikashandisa zvipo zvedu kuti Mwari akudzwe? Hatidi zvose kuita izvi zvakakwana.
Fall murudo nokubwinya kwaMwari
Dambudziko iri isu kazhinji havaoni kubwinya kwaMwari sechinhu chakakodzera vachirwira uye kurarama. Uye nokuti zvatisingaoni Mwari sezvo mbiri zvakakwana. Paunotanga kunzwisisa sei chikuru Mwari ndiye, uchaita kutanga kunzwisisa nei Universe inotenderera naye uye iye oga.
Paunoverenga Isaiah 40 ukaona kuti kuedza kutora kubwinya kwake nokuda pachako kana mumwewo chinhu zvishoma pane ugororo. Nderake iye uye akakodzera naro!
Ndingada kukukurudzira kuverenga zvikamu avo choRugwaro apo vanhu Vanovhaira nezvaMwari. Isaiah 40. Munyengetero waHana 2 Samuel 2. Moses rwiyo pashure vanoenda nomuGungwa Dzvuku. Pisarema 135.
Kusvikira wasvikapo wakaputirwa kubwinya kwaMwari, hamungambovi hanya kushandisa zvipo zvenyu nokuda kwaAri.
Dzimwe nguva zvakaoma kufunga sei kushandisa zvipo zvenyu nokuti kubwinya kwaMwari nokuti nguva dzose pachena kudaro. Zviri zvakawanda pachena paunoratidza kuva akajeka kutaura zvipo kana chinhu rinoita pakunamata. Kana kunyange unyanzvi. Asi hazvisi sezvo pachena apo zvipo zvenyu sokuti kutarisira kana mutsa.
Pauro anotipa zvinogona kujekesa dzimwe nzvimbo VaKorose. Teerera zvaanotaura muna VaKorose 3.
23 Zvose zvamunoita, kushanda nemwoyo wose, sezvo Ishe uye kwete kuvanhu, 24 muchiziva kuti kuna Ishe muchagamuchira nhaka sezvo mubayiro wenyu. Uri kushumira Ishe Kristu.
Pauro haasi pasi sokuti administrative zvipo, kana zvipo kubatsira vana, kana zvipo chete kuita zvisingakoshi basa zvakanaka harigoni kushandiswa kubwinya kwaJesu. Pane mibvunzo mitatu nyore tinogona kuzvibvunza kwakavakirwa zvaanotaura
Unofanira kushanda? Tinofanira 'kushanda nemwoyo wose "
Tinogona kuva pamuedzo kushanda lazily. Kunyanya zvinhu apo kubatana kuti Mwari akudzwe hakusi pachena. Asi Pauro anoti basa nomwoyo wose kana nomwoyo kwomwoyo wako. Tinofanira kushanda nokutendeka uye kushingaira
2. Ndianiko iwe kushandira? Iwe basa Jesu.
Dzimwe nguva tinogona kuedzwa kushanda nesimba, asi kuzviita nokuda zvakaipa vanhu. Kuti tifadze Bhasi yedu kana vabereki vedu kana navo. Tisingadi vanowanzova zviremera pamusoro pedu, tiri pakupedzisira kushanda kufadza Mwari kwete kwavari. Hatigoni kuwana rudo rwake, asi tinogona kuvimba naye uye kumuisa mufaro nokukudza naye.
3. Muchaita kugamuchira? Your nhaka sezvo imi mubayiro
Dzimwe nguva tinogona kuedzwa kuti kunyange nesimba Jesu, asi afunge nhamo ini, Ndinoshanda chinhu. Ndizvo zvakaipa! Iwe basa kufadza Mwari, iwe kupindura kwaVari. Uye isu achapiwa mubayiro pamabasa edu, nenyasha dzaMwari. nyasha dzake kunotikurudzira kushanda nemwoyo wose uye isu mubayiro nokuda basa zvaanoita matiri. A mari yokuwedzera hakuna kukwana kuvaka upenyu hwako kumativi, asi mibayiro husingaperi vari.
Kuronga kuti Mwari akudzwe
Wati wambocherechedza sei isu zano zvinhu tiri zvechokwadi wakaputirwa?
Ndakaona uyu muupenyu hwangu uye mhosva nazvo. Heuno muenzaniso. Ini zvichiitika kuva anoda Shoes. Uye dzimwe nguva ndinogona kuti zvakare rwakaputirwa machiri. Vhiki Saka mashoma apfuura takava mukana kuenda guru sneaker chitoro patakanga mune rimwe guta uye ndainetseka zvose nezvazvo. Uye ipapo sokunge akanga asiri kuenda kubasa panze.
Ini freaked panze uye akanga achipfuura taisireva kuti zviitike. Ini ndaishanyira uye kufunga kuchinja ndege, nezvimwewo. Asi zvino ndakarega uye ndakazvibvunza, "Sei?"Nokuti ndakanga rwakaputirwa machiri.
Isu sokuti kuronga zvinhu kuti tinoda. Tinowana nzira kuti zvinhu zviitike. Uye kana muchida kubwinya kwaMwari here kuwana nzira kushandisa pose pose hwako nokuti. Iye zvakakodzera.
zano rangu ndiro ichi: Chase Jesu uye kuwira murudo naye kusvikira munoona zvose sezvo mukana kuudza vanhu nezvake.
Emeteria • Zvita 18, 2014 pa 2:33 pm • pindura
Amen! Ndaifanira kunzwa nhasi ichi. Ndatenda!
Keshia • Zvita 18, 2014 pa 2:34 pm • pindura
Gordie Tamayo • Zvita 18, 2014 pa 2:54 pm • pindura
Ndinokutendai nokuti kugoverana. Izvi zvaidiwa zvikuru uye kuendeswa mwoyo. G
Cameron • Zvita 18, 2014 pa 8:36 pm • pindura
Zvirokwazvo, angu kukoshesa hwangu vave kupinzwa nemaonero nokuverenga ichi…… Dzimwe nguva ndinonzwa zvishoma kuzadzikisa basa ini inonzi kuita…..zvokuti zvipo chaizvo Mwari akandikomborera ini yakawanda nguva vanowanzotanga kushoropodza…..saka Ini kuzvidza chaizvo zvinoreva basa Mwari anodana kwandiri kuita uye bvikinyidza Rudo uye mweya wake chinangwa basa rangu kukanganwa kuti zvinovinga Kubwinya Kwake uye kubwinya oga sei ndinoita uye ndichiripo……#blesstobecallforpurpose #
auye Kaputula • Zvita 20, 2014 pa 4:37 ndiri • pindura
Deep bro.am yakakurudzira
Michael • Zvita 22, 2014 pa 3:11 ndiri • pindura
'Chase Jesu uye kuwira murudo naye kusvikira munoona zvose semukana kuudza vanhu nezvake.’
Kuwana nzira nani sei kuti zvaigona kunzi. nguva dzose zvinotyisa.
Chris • Ndira 8, 2015 pa 12:23 pm • pindura
Great Nyaya BRO. It vakandikurudzira uye ichindiudza vamwe mazano anokosha. Ndiko kusaka zvakakosha saka kuramba kuverenga magwaro nokushingaira, Bhaibheri nguva dzose Inotipazve pfungwa dzedu. Uye sezvo shoko inoenda, “kana musingadi kuishandisa, iwe nahwo”. Zvakakosha kushandisa zvatinodzidza rugwaro uye kuti vanongogara tsika. zvinovhiringidza, kusuruvara, nokutamburira kunogona murombo tsika kana kushandiswa zvakanaka, zvichiguma zvakawanda mwoyo. nzira yaMwari ndiyo nguva dzose nenzira yakanakisisa, KuvasaKristu ndiyo nzira yorugare uye nomufaro uye vachikudza Mwari.
Sammy Msiska • Ndira 21, 2015 pa 11:08 pm • pindura
Muri wakanaka vanhu vaya vanoshandisa chipo chavo chose kuti vakudze Mwari. Ndafara kuona iwe kwete kutaura shoko asiwo kuzviita. Iwe kurudzira ini rwendo…ramba Glorifyin Mwari
TamekaBowen • Kurume 2, 2015 pa 5:21 pm • pindura
Naizvozvo simba. Zvose zvakasikwa zvechokwadi Jesu uye naJesu. Chii nani mukana kukurudzira vhangeri rake inova mweya yedu chinangwa mumuviri waKristu!! Hareruya chii mashoko ane simba!! :-)
Leo • Chikumi 24, 2015 pa 6:07 pm • pindura
Ndaifarira nokuti zuva nezuva ndinoita zvishoma zvakanaka uye zvakawanda zvakaipa, Ndiri kuvenga ichi chaizvo asi mashoko ako yakandipa tariro nokuda chinja. Hatifaniri kufunga zvatiri kuita zvakanaka uye izvi kuchatibatsira kuvandudza
Leo • Zvita 11, 2015 pa 2:01 pm • pindura
satendeseka, Rumbidzai Mwari kuparidza ichi, nokukurumidza Akamirira anogona kushandura mavhidhiyo enyu muchiSpanish, tingadai kubatsira chaizvo!